कुकुरले टोकेमा गर्नुपर्ने प्राथमिक उपचार । - Varient - News Magazine
Jul 20, 2021 - 12:43 Updated: Jul 25, 2021 - 18:24
भनिन्छ कि कुकुरहरू मान्छेका सबै भन्दा राम्रा साथी हुन्, यद्यपि जिस्काउँदा वा रिस उठाउँदा त्यसले मान्छेलाई टोक्छ। कुकुरले टोकेपछि विभिन्न संक्रमण, रोग र अन्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
कुकुरको आकार र टोकाइमा निर्भर गर्दछ, आकार अनुसार घाउँ सामान्य वा गम्भीर हुन सक्छ। डरले वा पहिले कुनै घटनाको कारणले आफूलाई बचाउन कुकुरले टोक्ने गर्दछ।
कारण जेसुकै होस्, कुकुरले टोकेपछि तपाईले चिकित्सकको सहायता लिनु पर्छ। यदि कुकुरको टोक्यो भने घाउलाई राम्ररी धोएर प्राथमिक उपचार गर्नु धेरै महत्त्वपूण हुन्छ।
यस लेखले कसरी कुकुरको टोकाइमा प्राथमिक उपचार, सावधानी र इंजेक्सन गर्ने भनेर वणर्न गर्दछ।
कुकुरले टोकेमा के हुन्छ?
कुकुरको टोकाइले चोटपटक र अन्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। यी समस्याहरू निम्नानुसार छन्।
१.नसालाई हानी हुन्छ।
कुकुरको टोकाइबाट सामान्य वा गम्भीर क्षति हुन सक्छ। कहिले काहीँ स्नायुहरूमा थोरैमात्र असर पर्न सक्छ र चाडै निको पनि हुन्छ। तर कतिपय अवस्थाहरूमा स्नायुहरूलाई स्थायी असर पर्दछ, जसलाई निको पार्न सम्भव हुदैन।
कुकुरले टोकेपछि इन्फेक्सन वा संक्रमण हुने खतरा धेरै बढी हुन्छ। कुकुरले टोकेपछि ब्याक्टेरिया छालाको भित्री सतहमा पुग्छ र अधिक मात्रामा यसले संक्रमण बढाउने गर्दछ।
रेबीज धेरै खतरनाक रोग हो। पागल कुकुरहरू वा बाटोमा हिड्ने बौलाहा कुकुहरुले रेबीज भाइरस बोक्छन् र अन्तिम चरणमा कुकुरहरू वा व्यक्तिहरूलाई टोक्दा तिनीहरूमा रेबीज सर्दछ।
कुकुरले टोके पछि व्यक्ति धेरै समयसम्म यो घटनाबाट मानसिक रूपमा प्रभावित हुन्छ। पोस्ट ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर कुकुरको टोकाइबाट हुने आम प्रभाव हो।
कुकुरको टोकामा के गर्ने?
कुकुरले टोकेपछि उपचार गर्नु महत्त्वपूण हुन्छ। यदि धेरै रक्तस्राव भएको छ भने, तुरुन्त अस्पतालमा जानुहोस् र रक्तस्राव रोक्न प्रयास गर्नुहोस्। यद्यपि यस भन्दा पहिले तपाई घाइतेलाई प्राथमिक उपचार दिन पनि सक्नुहुन्छ। कुकुरले टोकोमा प्राथमिक उपचार दिने तरिका निम्न छ।
१.घाउलाई साबुन र मन तातो पानीले राम्ररी धुनुहोस्।
यो गर्नाले घाउमा वा यसको वरपरको स्थानमा रहेका कीटाणुहरू हटनेछ।
२.घाउमा एन्टिबायोटिक औषधि लगाउनुहोस। यो औषधीले घाउलाई उपचार गर्ने क्रममा संक्रमण हुन दिदैन। औषधिको प्याकेटमा दिइएका निर्देशनहरू अनुसार लागू गर्नुहोस्।
३.घाउ पट्टी गर्नुहोस्।
यदि अत्यधिक रक्तस्राव भएको छ भने पट्टीले बिस्तारै दबाएर रक्तस्राव रोक्न कोसिस गर्नुहोस्। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पतालमा लैजानुहोस्।
पट्टी फोहर हुनासाथ वा दिनमा बारम्बार पट्टी बदलनुहोस। ताकि घाउँ संक्रमित नहोस्। फेरि घाउ धुनुहोस् र पहिले जस्तै एन्टिबायोटिक औषधि लागू गर्नुहोस् र यसमा नयाँ पट्टी लागू गर्नुहोस्।
कुकुरको टोके पछि सावधान हुनुहोस।
कुकुरले टोके पछि निम्नलिखित बुँदाहरू दिमागमा राख्नुहोस्।
१.दिनमा ४ देखि ५ पटक घाउलाई सफा गर्नुहोस् र साबुन वा डिटोल प्रयोग गर्नुहोस्।
२.घाउलाई सकेसम्म माथि फर्कायर राख्नुहोस् र पट्टी गर्नु अघि आफ्ना हातहरू राम्रोसँग धुनुहोस्।
३.यदि तपाइलाइ टोक्ने कुकुर बौलाहा कुकुर हो जस्तो लागेमा तुरुन्तै डाक्टरकोमा जानुहोस् र रेबीजको खोप लिनुहोस्।
४.घरपालुवा कुकुरले टोकेमा पनि बेवास्ता नगर्नुहोस् र डाक्टरकहाँ जानुहोस।
कुकुरको टोकेमा लगाउनुपर्ने इन्जेक्शन।
टिटानस स्नायु प्रणालीको रोग हो जुन ब्याक्टेरियाको कारणले हुने गर्दछ। यस्तो ब्याक्टेरिया माटो, पशु मल र हाम्रो आंत मा पाइन्छ। यदि यी बीजाणुहरू कुकुरको टोकोमा छालामा छिर्छन् र यी बीजाणुहरू बढ्न थाल्छ र विषाक्त पदार्थहरू उत्पादन गर्न थाल्छ जसले रक्तप्रवाहलाई क्षति पुर्‍याउँछ। यसैले कुकुरले टोकेपछि टिटानसको इन्जेक्सन लिन महत्त्वपूणर् हुन्छ।
यदि कनै व्यक्तिलाई कुकुरले टोकेमा र कुकुरमा पनि रेबीज छ भने, त्यस व्यक्तिलाई पनि रेबीज हुन्छ, त्यसैले खोप लिन आवश्यक छ।
यदि त्यस व्यक्तिलाई रबीजको खोप पहिल्यै दिइएको छैन भने उसले रेबीजको चार वटा इन्जेक्सन लगाउनुपर्ने हुन्छ। कुकुरले टोके लगत्तै एउटा इन्जेक्सन र तेस्रो, सातौं र चौधौं दिनमा बाँकी इन्जेक्सनहरू लगाउनुपर्दछ। उक्त व्यक्ति लाई इंजेक्शनको साथ “रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन“ भनिने खोप पनि दिनु पर्छ।
यदि उक्त व्यक्तिले पहिल्यै रेबीज बिरुद्द खोप लगाइसकेको भए, पछि केवल दुई वटा इंजेक्शन लगाए पुग्छ। ( एउटा कुकुरले टोके लगत्तै र अर्को तेस्रो दिनमा। “रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन“ यस्तो अवस्थामा लगाउनु आवश्यक हुदैन।
पानीमा किशमिश भिजाएर खानुका फाईदा र बेफाइदाहरु।